IYurophu inenye futhi ikhubalo ezithile ebusika phakathi nezinyanga ezibandayo ukuthi abafani nanoma yiziphi indawo emhlabeni. Kukhona okuningi ezihlukahlukene, futhi akukho izindawo ezimbili babe nomuzwa ofanayo kanye nomkhathi. Empeleni, abantu abaningi bathi emadolobheni phakathi nezinyanga ezibandayo uzizwe sengathi beya entsha okuyiwa kuyo. Winter unekhono kumnandi okuguqula Europe ngokuphelele, bese, ukudala isipiliyoni ngokuphelele entsha ukuze izivakashi ukuthi abakwazi ukuzwa nganoma isiphi esinye isikhathi sonyaka. I iqhwa eliwayo kuhambisana eziningi imisebenzi ebusika namaholide ezibalulekile ukwakheka konke Festive kakhulu. Naphezu kobuningi izinguquko nobuhle, akunakwenzeka ukuvakashela konke. Uma ufuna uuku ngcebeleka amanye ethandwa kakhulu travel izindawo, ziyangena kulezi 5 izindawo ebusika e-Europe.
Uma ufuna Winter Wonderland ukuthi kuyokwenza mangaza nawe, ke ubhekisise Budapest. Kuyinto idolobha ephelele yokubaleka ebusika. Esinye sezizathu eziyinhloko ukuthi abantu abaningi bakhetha Budapest kuyinto amanani ezingabizi. Uthola ukuzwa edolobheni lovely kusilinganiso okungabizi. Budapest ngokuvamile egcwele izivakashi ngesikhathi sasehlobo. Nokho, ebusika, uthola ukubona ubuhle idolobha izixuku sakugcina. Ngaphandle kwalokho, you get a lot of chimney cakes and tasty wine.
Venice kungenzeka kungabi into yokuqala okumele efika engqondweni lapho Ucabanga Ubusika-European. Nokho, uma yokuya edolobheni yemiselekazi ebusika, wena uyokukhumbula kuze kube phakade. Imigwaqo aminyene nezindawo zokudlela ezinhle ezinomsindo kuthiwa toned phansi, futhi ubona thimu of dolobhakazi ukuthi ihlobo ayikwazi ukubonisa. Zonke umsindo befuna nezinyanga zasehlobo kufakwa a ezolile futhi umoya serene ukuthi uphelele ukungcebeleka ebusika. Nokho, kubalulekile ukuqaphela ukuthi idolobha kuza ekuphileni ngokushesha kakhulu lapho Venice Carnival imiqulu emhlabeni. Njalo Februwari, edolobheni uthola kuqubule izivakashi, kanye buso ezihlotshisiwe ukugcwalisa emigwaqweni edolobheni. zokubhukuda ekuticambela abadansi emigwaqweni ukubhubhisa umuzi emlandweni ezimibalabala ekuphileni. Uma ufuna ebusika emnandi awusoze ukhohlwe, ukubeka Venice ohlwini lwakho.
IYurophu inenye futhi kunokuthile kwawo wonke umuntu. Kukithi ukuba unqume ukuthi yini ebusika yakho Wonderland ifana kanye nokusetshenziswa Londoloza Isitimela ukuze uthole khona. Kukhona okuningi okwenzeka e zasebusika, so get adventurous and take a bold step forward.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Winter Izikhumulo EYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/winter-destinations-europe/ – (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
europetravel trainjourney amathiphu isitimela travelaustria travelfrance travelitaly travelswitzerland winterdestination winterdestinations wintertravel